ဗမာစကား|Burmese | Speak My Language
ဆီးချိုရောဂါဌာန မှ ဝါရင့်အကြီးတန်း သိပ္ပံပညာရှင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Interview with Senior Scientist from Diabetes Institute
မေးမြန်း ပြောဆို တင်ပြချက်များဟာ ဆီးချိုရောဂါလို ရောဂါ အခြေအနေ ရှိနေသူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းနဲ့ သတင်းအချက်အလက် အကြံပြုချက်တွေဖြစ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါဌာနမှ ဝါရင့်အကြီးတန်း သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး တဉီးကို မေးမြန်းတင်ပြထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူ လူအတော်များများအတွက် အလွန် အသုံးဝင်မဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ read more
This podcast consists of questions and answers which provide information and suggestion for people with diabetes to manage their health more freely in their daily life. All information and suggestions are given byaSenior Scientist from the Diabetes Institute. This interview contains useful information relevant to many people. read more
လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အကြံဥာဏ်ပေး အတိုင်ပင်ခံ ၀န်ဆောင်မှုများ
Career Counselling Services Available for Community
မေးမြန်း ပြောဆို တင်ပြချက်များဟာ ရပ်ရွာလူထု (မသန်စွမ်းသူများနှင့် ကရင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်) အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းလမ်းညွှန်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှုများပေးသော ၀န်ဆောင်ပေးမှုများအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အလုပ်မှ ထွက်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်မှုနှင့် အကြံညဏ်များ ပေးသော ၀န်ဆောင်ပေးမှုများ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ တင်ပြထားတဲ့ လမ်းညွှန်မှုနှင့် အကြံညဏ်များပေးခြင်း ၀န်ဆောင်မှုတွေကတော့... read more
This podcast is about Career Counselling services available for the community (including people with disability and indigenous peoples) such as services that provide career guidance and career counselling, which are designed to help people choose, change, or leaveacareer. The interview also provides information about how counselling services can helpaperson explore skills and strengths, consider education levels and give advice about continuing education, and determine interests of the... read more